I-AASraw nmn & nr powder yoMvelisi hplcpl98% | I-AASraw
I-AASraw inikezela ngemveliso encinci yokuphendula ngokukhawuleza kwimfuno yamanani amancinci kunye neemfuno zokukhulisa ukukhula (1 ukuya kwi-50 kg).
Izixhobo ze-AASraw zilungele ukuveliswa kweekhemikhali eziphakathi kunye nezithako ezisebenzayo zamayeza (ii-APIs) kuvavanyo lweklinikhi,
kunye nakwii-API ezincinci zentengiso encinci. Izityalo ezincinci zisebenza ngokwezikhokelo ze-GMP.
Indlela ye-AASraw yokumodareyitha ukulungiselela izixhobo kwiimfuno ezithile zenza ukuba la maziko akwazi ukuphatha imveliso encinci ukuya kwinqanaba eliphakathi.
Inkqubo kunye nokuthunyelwa kweteknoloji kunye nokutya okulingana nokukhula kwezityalo zethu ezininzi.
Njengenxalenye ye-AASraw epheleleyo yevolumu yokuvelisa kunye neenkonzo zokukhulisa, amandla amakhulu anokubakho kwimveliso yokufikelela kwi-100 eliqela. iitoni imveliso nganye kunye nonyaka, umz. 100 m3 amandla.
◆ Hydrogenation kunye nezinye iimpembelelo eziphezulu (ukuya kwi-80 bar)
I-chemistry enobushushu obusezantsi (ukuya kuthi ga -80 ° C)
◆ Ukucwina (i-1 tons nganye)
◆ Izithako ezisebenzayo zezobisi (GMP)
◆ Izixhobo zokuphunga izixhobo (ukuya kwii-70)
Chemistry Ubushushu obuphezulu (ukuya kuthi ga kwi-250 ° C)
◆ I-medium--pressure-chromatography yamandla okufikelela kwi-20 kilogram yexabiso lokuhlukanisa.
Ukubekwa wedwa kunye nokoma
Izixhobo zokubekwa bucala zokwenza umlinganiselo omncinci, ukwenziwa kweekhilo kunye nokwenziwa okukhulu.
◆ Iifayile zokucinezela (ukuhamba kunye nokulungisa, amagumbi ahlanzekileyo)
◆ I-centrifuges (amacandelo ahlanzekileyo)
Amagumbi ama-3 acocekileyo (Class100'000)
◆ I-2 amagumbi okucoca azinikeleyo
◆ Ukucoca izixhobo (GMP)
◆ Voca umgcini womsila
◆ I-dryer conus (4.5m3, yenziwe ngentsimbi eshayinayo)